सत्यमोहनको सम्मान जिउँदो इतिहासको सम्मान हो
शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी भोलिबाट सय वर्ष पूरा गर्दै छन् । उनी सय वर्ष पुगेको अवसर पारेर ललितपुर महानगरपालिकाले एक वर्षभर विभिन्न कार्यक्रम गर्ने निर्णयका साथै भोलि महानगरमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ । जोशीको जन्म शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम मनाउन महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनको संयोजकत्वमा १ सय ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । मनपा प्रमुख तथा जन्मोत्सव समारोहका संयोजक महर्जनसँग शिलापत्रले जन्मशताब्दी मनाउनुपर्ने कारणका विषयमा कुराकानी गरेकाे छ ।
शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको शतवार्षिकी मनाउने योजना कसरी बन्योे ?
शताब्दी पुरुष सत्यमोहनज्यूले यो उमेरसम्म देशको नाम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन पु-याउनुभएको योगदान महत्त्वपूर्ण हो । कला र संस्कृति संरक्षणमा उहाँको महत्त्वपूर्ण योगदान छ ।
उहाँको सम्मान जीवनकालमै गर्न सक्यो भने त्यसको महसुस उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हो । सत्यमोहन जोशी राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण निधि हुन् । जीवन छँदा नै सम्मान गर्ने परम्पराको सुरुवात गर्न महानगरपालिकाले जन्म शताब्दी महोत्सव मनाउने योजना बनाएको हो । त्याग, तपस्या र योगदानलाई मृत्युपछि मात्रै सम्मान गर्ने परम्परा छ । त्यस्तो परम्परा सुधार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।
जन्म शताब्दी महोत्सवका कार्यक्रम कस्ता छन् ?
ललितपुर कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार १ सय ११ सदस्यीय समिति मेयरको अध्यक्षमा गठन भएको छ । उक्त समितिले वर्षभरि नै विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्छ । ललितपुर महानगरपालिका वडा–३ अध्यक्ष गोपाल महर्जनको संयोजकत्वमा कार्यसम्पादन समिति गठन गरिएको छ । यसले सबैसँग छलफल गरेर वर्षभरि गर्ने कार्यक्रमको योजना बनाएको छ । त्यसैअनुसार अगाडि बढ्छाैं ।
झन्डै एक वर्षअघि महानगरपालिकाले सत्यमोहन जोशीलाई सवारीसाधन पनि उपलब्ध गराएको थियो, यो जरुरी थियो र ?
यो सोच संवेदनशीलताले ल्याएको सोच हो भन्दा पनि हुन्छ । यसको अर्थ भावुक भएर भन्न खोजेको होइन । उहाँको सम्मान गर्दै जीवनयापन सजिलो होस् भन्नाका लागि हो ।
मेयर पदमा निर्वाचित भएपछि म पुगेका केही कार्यक्रममा शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई भेटें । उहाँ त्यो कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । मैले उहाँलाई जति पटक भेटें, त्यत्ति नै पटक मैले उहाँलाई घरसम्म पु¥याइदिएँ । तर, यो सधैं सम्भव थिएन । मनमा सधैं एउटै प्रश्न उब्जिन्थ्यो ।
त्यो प्रश्न थियो, ट्राफिकलगायत सहरको घुइँचोलाई छिचोलेर उहाँ कसरी त्यो कार्यक्रममा पुग्नुहुन्छ ? मेरो मनमा एउटा विचार आयो, उहाँको यात्रालाई सहज बनाउन ललितपुर महानगरपालिकाले केही गर्नैपर्छ । त्यसपछि महानगरले उहाँको यात्रालाई सहज बनाउन सवारीसाधन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । ड्राइभर, तेल, टेलिफोन र गार्डको पनि व्यवस्था गरेका छाैं । महानगरपालिकाले उहाँलाई गरेको सम्मानको एक रूप हो ।
महानगरपालिकाले किन यति धेरै सुविधा दिएको ?
उहाँको जीवनलाई यो सुविधाले सहज बनाएको छ । हिँड्डुल गर्न सहज भएको छ । वास्तवमा हामीले हाम्रा जिउँदा इतिहासलाई गर्ने भनेको सम्मान यस्तै हो । जसले उहाँहरुको जीवन सहज होस् । त्यसलाई अनुभव गर्न पाउनुहोस् ।
सत्यमोहन जोशीलाई सवारीसाधन उपलब्ध गराएपछि यहाँको प्रशंसासँगै प्रशस्त विरोध भयो नि त ?
यो काम गरिसकेपछि विरोध होइन कि यति धेरै स्याबासी पाएँ, जुन मैले यसभन्दा अघि पाएको थिइनँ । म ज्यादै खुसी भएँ र छु पनि । राम्रो निर्णय भएको रहेछ भन्ने लाग्यो । विदेशमा बस्नुभएका नेपालीले समेत टेलिफोन, इमेललगायतबाट स्याबास भन्नुभयो । वास्तवमा मलाई यो निर्णयले मलाई एकदमै खुसी दियो ।
ललितपुर मनपाले सामान्य कार्यक्रम आयोजना गरेर हामीले उहाँलाई सवारीसाधन प्रदान गर्यौं । त्यसलगत्तै मैले सत्यमोहन जोशीसँग शतवार्षिक कार्यक्रम मनाउन अनुमति मागें ।
त्यत्ति बेलासम्म त अन्य धेरैवटा समूहले शतवार्षिकी मनाउन प्रस्ताव लिएर आउनुभएको रहेछ । ललितपुर मनपाले गरेको प्रस्ताव सुनेर उहाँ खुसी हुनुभयो । तत्काल स्वीकार गर्नुभयो । त्यसपछि हामी उहाँको शतवार्षिकी कार्यक्रम मनाउने तयारीसाथ अघि बढेका हाैं ।
के छन् त कार्यक्रम ?
उहाँ सय वर्ष पुगेको अवसरमा भोलि हामी सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत अभिनन्दन गर्दै छाैं । साथै यो एक वर्षभरि हामी विभिन्न कार्यक्रम पनि गर्दै छौं ।
जन्मदिनमा कार्वाहक प्रधानमन्त्री इश्वर पाेखरेलकाे प्रमुख आतिथ्यमा विशेष कार्यक्रम भोलि नै हुन्छ । उहाँलाई बाजागाजासहित नगर परिक्रमा गराएर विशेष कार्यक्रममा सम्मान गरिन्छ । भोलि नै हामी रक्तदान कार्यक्रम पनि गर्दै छौं ।
महानगरपालिकाले साँझ दीपावली पनि गर्छ । उहाँसँगै नगरभित्रका एक सय वर्ष पुगेका अन्य ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि हामी भोलि विशेष सम्मान गर्छौं ।
जेष्ठ नागरिक हाम्रा गहना हुन् । उहाँहरुबाट हामीले धेरै सिक्नु छ । ज्येष्ठ नागरिक र जोशीको सम्मानमा भोलि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय यसअघि नै भइसकेको छ ।
हामी सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर उहाँको सम्मानमा चाँदीका मुद्रा पनि निकाल्दै छांै । जुन २५ सयको देखि १ सय रुपैयाँसम्मको हुनेछ ।
उहाँलाई महानगरले गोसाइँकुण्ड पनि लैजान्छ । सँगै उहाँको तस्बिर अंकित हुलाक टिकट पनि निकाल्नेछ ।
यही वर्ष सगरमाथाको शिरमा जोशीको तस्बिर अंकित ब्यानर फहराइनेछ । उहाँको जीवनी र योगदानलगायत विषय समेटेर वेबसाइट पनि बन्छ । विद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा उहाँका जीवनी समेट्ने प्रयास गरिरहेका छाैं । यस्ता थुप्रै कार्यक्रम छन्, जो हामी वर्षभरि नै गरिरहन्छाैं।
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख ३०, २०७६, ०१:५२:००